Filtrer les éléments par date : jeudi, 20 septembre 2018
jeudi, 20 septembre 2018 23:40
Sambava: Mitohy rahampitso ny fakana am-bavany ny Ben'ny Tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy
Naharitra ny fakana am-bavany an' ireo mpiasan'ny Kaominina Sambava hatramin'io hariva io, tsy tratra androany io na dia niezaka aza ny avy amin'ny Fitsarana ka voatery hitohy rahampitso manomboka amin'ny fito ora maraina indray.
jeudi, 20 septembre 2018 22:52
Mahajanga: Voasambotra ireo nanafika kioska teo amin'ny bois sacré
Andro vitsy monja taorian'ny fanafihana kioska teo amin'ny bois sacré, nahaverezana vola 20 tapitrisa Ariary sy nahafatesana mpiambina iray, tra-tehaka ny talata 18 septambra teo izy roalahy, izay nandray anjara mivantana sy olona telo mianadahy hafa niray tsikombakomba.
Sarona niaraka tamin'izy ireo ny moto marika ABM, nentina nilefa rehefa avy nangalatra, sy moto iray hafa marika Kinlon, novidiana tamin'ny vola nangalarina, ambim-bola 2.900.000 Ariary, ary ity finday ity izay porofo tsy azo nialana an'ny kioska notafihina.
10 tapitrisa Ariary ny lelavola mivaingana lasan'ireo jiolahy tamin'io fanafihana niseho ny sabotsy 15 septambra io, ary 10 tapitrisa Ariary kosa tao anatin'ireo finday fandefasana sy fandraisana vola.
jeudi, 20 septembre 2018 22:44
Sambava: Niakatra Fitsarana n'y Ben'ny Tanàna sy mpiara-miasa aminy miisa dimy
Ny Benin’ny Tanàna, ny Sekretera jeneralin'ny Kaominina, ny Comptable, ary ny Percepteur miisa 03 ireo natolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha androany maraina. Tamin’ny 8ora 15mn no niainga teto Sambava.
jeudi, 20 septembre 2018 09:10
Analavory-Itasy: Mamono ny pesta
Mpivady matin'ny pesta aretin-tratra.